Umgaqo-nkqubo wabucala-iGolide Laser
Iphepha lesinyithi eliphindwe kabini kunye nokusika iTyhubhu
Ileyibhile, ukuBambelela, iTape eBonakalisayo
IGolden Laser iyakuhlonipha kwaye ikhusele imfihlo yakho. Siza kuyikhusela nayiphi na ingcaciso oyinikayo xa undwendwela le webhusayithi.
Kule webhusayithi, ungonwabela nayiphi na inkonzo oyinikiweyo, njengokubeka iodolo, ukufumana uncedo, ukukhuphela iifayile kunye nemisebenzi yokuthatha inxaxheba. Ngaphambi kokuba udlule, uyacelwa ukuba ugcwalise ulwazi lwakho lomntu esinokuthi sikunikeze ngokhetho olufanelekileyo kwaye sikhuphe ibhaso kuwe ukuba likho.
Siphucula ngaphandle kweenkonzo zethu kunye neemveliso (kubandakanya ubhaliso) ukuhlangabezana neemfuno zakho. Ukuba kunokwenzeka, siya kufuna ulwazi oluthe kratya malunga nenkampani yakho, amava kwiimveliso zethu kunye nendlela yokunxibelelana.
Lonke ulwazi lwakho kule webhu luya kuba lukhuseleko oluqinileyo. Ngolwazi, iGolder Laser yethu iya kukubonelela ngenkonzo yakho engcono kwaye ekhawulezayo. Ngamanye amaxesha, sinokukwazisa uphando lwakho lwentengiso kunye nolwazi ngemveliso.
Sinoxanduva olusemthethweni lokukhusela naluphi na ulwazi esiluqokelela kuwe, kubandakanya ingxelo okanye ezinye iindlela. Oko kukuthi ngaphandle kweGolide yeGolide akukho naliphi na iqela lesithathu eliya kulonwabela ulwazi lwakho.
Ngokuqokelela ulwazi lwakho kwiwebhu kunye nokudibanisa idatha evela kumntu wesithathu, siya kukucebisa ngezona mveliso kunye nenkonzo.
Qaphela: Olunye uqhagamshelo kule webhusayithi, lukunceda nje ngokulula kwaye luya kukukhupha kule webhusayithi, oko kuthetha ukuba iGolden Laser yethu ayizukuthatha xanduva malunga nemisebenzi yakho kunye nolwazi kwezinye iiwebhusayithi. Ke nawaphina amanqaku malunga nokunxibelelana nendawo yewebhu yesithathu aya kuba ngaphaya kolu xwebhu lwabucala.
Siceba ukukhusela ulwazi lwakho olupheleleyo, ukunqanda ukulahleka, ukusetyenziswa gwenxa, utyelelo olungagunyaziswanga, ukuvuza, ubundlobongela kunye nokuphazamisa. Yonke idatha kwiserver yethu ikhuselwe ngumlilo kunye negama eligqithisiweyo.
Siyavuya ukuhlela ulwazi lwakho ukuba uyafuna. Emva kokulungiswa, siya kukuthumelela iinkcukacha ezichanekileyo nge-imeyile ngetsheki yakho.
Iicookies ziziqwenga zedatha ezenziweyo xa undwendwela iwebhusayithi yethu kwaye zigcinwe kulawulo lwecookie kwikhompyuter yakho. Abayi kuze batshabalalise okanye bafunde idatha kwikhompyuter yakho. Iicookies zibamba ngentloko iphasiwedi yakho kwaye ukhangele izinto eziza kukhawulezisa ukukhangela kwiwebhu yethu ngexesha elizayo. Kananjalo ungazala iicookies ukuba awufuni.
Ukutolikwa kwale ngxelo kunye nokusetyenziswa kwewebhusayithi yeyakwaGolden Laser. Ukuba lo mgaqo-nkqubo wabucala uyatshintsha nangayiphi na indlela, siza kubeka ingxelo ehlaziyiweyo kweli phepha kwaye siqaphele nomhla weenyawo zeli phepha. Ukuba kukho imfuneko, siya kubeka uphawu olunokwenzeka kwiwebhu ukukwazisa.
Naziphi na iimbambano ezibangelwe yile ngxelo okanye ukusetyenziswa kwewebhusayithi ziya kuthobela umthetho ohambelana neRiphabhlikhi Yabantu base China.